FAQ - Quit Partner
Ku Saabsan Quit Partner Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo
Su'aalaha Badanaa la isweydiiyo ee Quit Partner
Wax dheeraad ah ka baro Quit Partner adigoo sahaminaya jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha inta badan nala weydiiyo. Ka bilow adigoo ka dooranaya liiska mawduucyada hoos ku yaala.
Waa maxay Quit Partner?
Waa maxay saacadaha shaqada?
Immisa ayay qaadan doontaa in lagu helo dawooyinka Iska joojinta boostada?
Maxay yihiin nooca taageerada lagu heli karo iska diiwaangelinta web-ka?
Ka wareegida Adeegyada QUITPLAN® oo u wareegida Quit Partner
Khadka-Iska-Joojinta ee Hindida Mareekanka (American Indian (AI) Quitline
Barnaamijyada cusub oo ay heli karaan dhalinyarada reer Minnesota: Noloshayda, Iska Joojinteyda (My Life, My Quit™)
Barnaamijka Caafimaadka Hab Dhaqanka
Barnaamijka Uur lahaanta
Wicida Quit Partner
U Dirida Fariin Qoraal Ah Quit Partner
Sidee baan ugu xayeeysiin karaa Quit Partner bukaannadeyda, macaamiisheyda, shaqaalahayga ama bulshadeyda?
Kawaran haddii aan ka heysto taageerida iska joojinta caymiskeyga?
Kawaran haddii aanan haysan caymis caafimaad?
Sidee ayuu Quit Partner wax uga qabtaa asturnaanta iyo qarsoodida?
Haddii aadan helin jawaabaha aad raadineyso, fadlan naga soo wac lambarka 1-888-QUIT-NOW (784-8669), 24 saacadood maalintii / toddobada maalmood ee usbuuca.
Quit Partner waa barnaamijyo iswata oo loo sameeyay inay ka caawiyaan deggeneyaasha Minnesota inay iska joojiyaan tubaakada ganacsiga. Waxaan siinaa adeegyo lacag la’aan ah deggeneyaasha Minnesota ee isticmaala nooc walba oo tubaakada ganacsiga, oo ay ka mid yihiin sigaarka, sigaarka elektrooniga ah iyo tubaakada la calaanjiyo.
Waxaan bixinaa ikhtiyaaro taageerid oo badan iyo ilo si ay dadka deggan Minnesota u awoodaan inay helaan hab ay iskaga joojiyaan oo sida ugu fiican ugu shaqeeya. Taageerada lacag la’aanta ah waxaa ka mid ah tababbar taleefanka iyo webka ah, barnaamijyada fariinta qoraalka iyo imaylka ah, iyo daawooyinka iska joojinta sida sharootada, xanjada ama nacnaca lozenges-yada oo loogu keeno albaabka gurigooda.
Quit Partner waxay sidoo kale leedahay barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay dadka la nool jirro maskaxeed ama ciladda isticmaalka maandooriye, dadka bulshadaha Hindida Mareykanka, dumarka uurka leh iyo dhalmada ka dib, iyo dhallinyara da’doodu tahay 13–17.
Taageerida waxaa horay u bixin jiray Adeegyada QUITPLAN®. Adeegyada QUITPLAN® waxay joojisay inay oggolaato isqorayaasha cusub laga bilaabo Abriil 1, 2020. Si loo hubiyo in dadka deggan Minnesota ay wali haystaan caawimaad lacag la'aan ah oo ay isaga joojiyaan sigaar-cabista, calaajinta tubaakada ama cabista sigaarka elektrooniga, Quit Partner ayaa hadda soo dhaweynaya isqorayaasha iyagoo u maraya websaydkeena iyo taleefankeena (1-800-QUIT -NOW (784-8669)). Intaa waxaa sii dheer, dadka degan Minnesota ee ay da'doodu u dhaxeyso 13 iyo 24 waxay sidoo kale heli karaan talooyin lacag la’aan ah oo waxay la xiriiri karaan tababare markaa ah iyagoo qoraal ugu diraya “Start” lambarka 36072.
Quit Partner waxaa kuu soo bandhigay Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, iyadoo ay la socoto barnaamijyada iska joojinta oo ay bixiyaan Caafimaaka Yahuuda ee Qaranka, Isbitaalka neefsashada ee ugu wanaagsan oo ugu weyn qaranka, bixiye khadka iska-joojinta oo aan faa’iido doon ahayn.
Quit Partner wuxuu halkan u joogaa caawimaad 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Naga soo wac wakhti kasta 1-800-QUIT-NOW (784-8669).
Haddii aad doorbideyso wada hadal online ah, waxaa nagala heli karaa wada hadalka online-ka (chat) Isniinta illaa iyo Jimcaha 8-da subaxnimo illaa iyo 10-ka habeenimo iyo Sabtida iyo Axadda 10-ka subaxnimo illaa iyo 8-da habeenimo.
Isku celcelis ahaan, kaqeybgalayaasha waxay helayaan NRT gudaha 2-3 maalmood oo maalmaha shaqada marka ay codsadaan.
Haddii qofku isku diiwaangeliyo online-ka ama taleefanka, taageerida lacag la’aanta ah ee aan bixino waa isku mid. Dadku waxay awood u yeelan doonaan inay ka helaan tababbar, daawooyinka iska joojinta iyo ilo macluumaad ah webka, oo waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan barnaamijyada taageerida fariinta qoraalka iyo imaylka ah. Shakhsiyaadka iska diiwaangeliya barnaamijka webka waxay sidoo kale heli doonaan sabuurad (dashboard) oo leh taageero iyo ilo dheeraad ah.
Goorma ayaa la bilaabay Quit Partner?
Barnaamijyada cusub ee iswata iyo websaydka waxaa la bilaabay Abriil 1, 2020.
Muxuu yahay nooca caawimaada uu bixiyo Quit Partner?
Iyada oo ay jirta taageerida 24/7 ee lacag la’aanta ah, waxaan kaa caawin karnaa inaad iska joojiso sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada wicitaan, fariimo qoraal, wada hadal onlineka ah, iyo Imaylo tababarid ah iyo dawooyinka iska joojinta sida sharooto, xanjo ama nacnaca lozenges-yada. Waxaan sidoo kale siinaa ilo gaar ah dumarka uurka leh iyo dhalmada kadib, dadka la nool jirro maskaxeed ama ciladaha isticmaalka maandooriye, dadka bulshadaha Hindida Mareykanka, iyo dhalinyarada. Waxaan qorsheyneynaa xitaa inaan ku darno qalab waxtar leh ee kale oo lacag la’aan ah mustaqbalka.
Miyaa wali xirmooyinka bilaabida ee daawooyinka iska joojinta (oo sidoo kale loo yaqaan daaweynta nikotiinka, ama NRT) la heli kari doonaa?
Haa. Qof kasta oo da'diisu tahay 18 jir ama ka weyn ayaa isdiiwaangelin kara si uu u helo xirmo bilaabida oo laba toddobaad ku filan oo lacag la’aan ah oo ah dawooyinka iska joojinta. Waxaad heli kartaa ilaa iyo laba xirmood sanadkii ba.
Waa maxay taageerka laga heli karo Khadka-Iska-Joojinta ee AI?
Qof kasta oo loo aqoonsado inuu yahay Hindida Mareykan/Dadka Asalka ee Alaska wuxuu iska qori karaa Khadka-Iska-Joojinta AI Quitline oo wuxuu heli karaa wicitaano tababar oo dheeraad ah iyo isku-dar ah daweynta beddelka nikotiinka (NRT) (Sharootooyin/xanjo ama sharootooyin/nacnaca lozenge-ga). Shakhsiyaadka sidoo kale waxay ka faa'iideysan karaan ilaha kale sida imaylada iyo fariimaha qoraalka ah. Shakhsiyaadka ayaa is qori kara laba jeer muddo ah 12kii bilood ba.
Miyaa labaddelay Lambarka taleefanka Khadka-Iska-Joojinta ee AI Quitline?
Haa. Lambarka taleefanka cusub waa 1-833-9AI-QUIT (1-833-924-7848).
Maxaa dhacaya haddii uu qof waco lambarka taleefanka AI Quitline ee hore?
Laga bilaabo Abriil 1, 2020, qof kasta oo waca lambarkii hore AI Quitline (1-888-7AI-QUIT ama 1-888-724-7848) waxaa loo gudbin doonaa qof ka tirsan barnaamijka cusub oo ka caawin kara inay bilaabaan taageerida iska joojinta lacag la’aanta ah.
Miyaa la beddelay cinwaanka websaydka AI Quitline?
Maya, cinwaanka wali waa aiquit.com .
Miyay tababarayaasha American Indian Quitline-ka cusub yihiin Hindida Mareykanka laftooda?
Haa, dhamaan tababarayaasha American Indian Quitline waa Hindida Maraykanka.
Waa maxay qalabyada ay ka heli karaan dhalinyarada Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit?
Noloshayda, Iska Joojinteyda (My Life, My Quit) waxay bixisaa ilaa shan kulan oo tababar ah iyada oo loo marayo qoraal fariin oo lagu wada-hadlo, ku wada-hadal ah Khadka internetka iyo wicitaano taleefanka ah, iyo sidoo kale waxyaalo gaar-u-ah-dhalinyarada si loo caawiyo kuwa jira da’da 13 - 17 sano inay iska joojiyaan sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada.
Da'dee isticmaali kara Adeegyada Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit)?
Noloshayda, Iska Joojintayda waxaa heli kara dhalinyarada da’doodu tahay 13–17. Ilaha waxaa laga heli karaa www.mylifemyquit.com oo loogu talagalay waalidiinta/ilaaliyaasha, waxbarayaasha, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo ururada bulshada ee u adeega dhalinyarada da’ walba ah.
Miyuu dhalinyaro kayar da'da 18 sano codsan karaan daawooyinka iska joojinta?
Maya, kama codsan karo Noloshayda, Iska Joojintayda ama Quit Partner.
Waa maxay lambarka taleefanka Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit)?
Qoraalka “Start My Quit” u dir taleefanka 1-855-891-9989 ama wac si aad u la hadasho tababare.
Waa maxay websaydka Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit)?
URL-ka/Cinwaanka waa www.mylifemyquit.com .
Ma heli karaan waalidiinta, barayaasha, iyo dadka kale agabyada loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada?
Haa, booqo www.mylifemyquit.com oo riix Ilaha, ama booqo bogga sigaarka elektrooniga ah/ Vaping ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.
Yaa loogu talagalay barnaamijka caafimaadka hab dhaqanka?
Barnaamijka waxaa loogu talagalay dadka la nool jirro maskaxeed iyo/ama ciladaha isticmaalka maandooriye.
Waa maxay qalabyada lagu bixiyo barnaamijka caafimaadka hab dhaqanka?
Marka uu qof is-qorto barnaamijka caafimaadka hab-dhaqmeedka, waxay heli karaan wicitaanno tababar oo dheeraad ah iyo daawooyinka iska joojinta oo si ay uga caawiyaan iska joojinta sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada. Shakhsiyaadka waxay sidoo kale ka faa'iideysan karaan ilaha kale sida imaylada iyo fariimaha qoraalka ah. Shakhsiyaadka ayaa is qori kara laba jeer muddo ah 12kii bilood ba.
Gudaha barnaamijkan, shaqsiyaadka waxay garanayaan xiriirka ka dhexeeya dareenkooda iyo hab dhaqankooda ee ku xiran tubaakada ganacsiga, waxay baranayaan hababka loola socdo dareenkooda iyo isticmaalka tubaakada ganacsiga, iyo baranayaan xirfadaha la qabsashada ee ka hortaga ku laabashada.
Waa maxay ilaha lagu bixiyo barnaamijka uur lahaanta?
Marka uu qof iska diiwaangeliyo barnaamijka uur lahaanta, waxay heli karaan wicitaano tababar oo dheeraad ah iyo daawooyinka iska joojinta sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada (oo ay la socdaan oggolaansho caafimaad). Shakhsiyaadka sidoo kale waxay ka faa'iideysan karaan ilaha kale sida imaylada iyo fariimaha qoraalka ah ee taleefanka oo loogu talagalay baahiyahaaga muddada aad uurka leedahay iyo dhalmada kadib.
Miyaa la heli karaa khadka TTY ee Quit Partner?
Haa, iyadoo loo maraya lambarka 1-877-777-6534.
Waa maxay luqadda tababbarka taleefanka lagu heli karo? Miyaa tababarka taleefanka lagu heli karaa luqaddo aan ahayn Afka-Ingiriisiga iyo Afka-Isbaanishka?
Tababbarka taleefanka waxaa lagu heli karaa in kabadan 200 luqaddood. Tababarayaasha Quit Partner waxay ku bixiyaan tababar Afka-Ingiriisiga, Afka-Isbaanishka iyo Af-Carabiga. Marka ay tahay luqaddaha kale, waxaan isticmaalnaa LanguageLine Solutions, oo ku xira tababarayaasha Quit Partner iyo is-qorayaasha turjumaan iyadoo la isticmaalaya wacitaan taleefan oo saddex dhinac.
Haddii shaqsi doorbido inuu isticmaalo khadka-iska-joojinta Sigaar-Cabayaasha ee Aasiyaanka ee Qaranka (Asian Smokers’ Quitline), oo lagu heli karo Afka-Kuuriyada, Afka-Kantoniiska, Afka-Mandariinka ama Afka-Fiyatnaamiiska, waa loo gudbin doonaa.
Miyuu lambarka taleefanka ka duwan yahay lambarka taleefanka Adeegyada QUITPLAN®?
Haa. Lambarka cusub waa 1-800-QUIT-NOW (784-8669). Lambarka cusub ee Afka-Isbaanishka waa 1-855-DEJELO-YA (335-3569).
Maxaa dhacaya haddii qof uu waco lambarka adeegyada hore ee QUITPLAN®?
Haddii qof waco lambarka hore ee Adeegga QUITPLAN® [1-888-354-PLAN (7526)], waxaa lagu xirayaa Quit Partner si ay u awoodaan inay si fudud u helaan taageero.
Sidee baan u la xiriiraa Quit Partner qoraal ahaan?
Dadka degan Minnesota ee da'doodu u dhaxeyso 13 iyo 24 waxay hadda u diri karaan fariin qoraal ee ah “Start” lambarka 36072 si ay u helaan talooyin iyo isku xiraan tababare markaa ah si ay u helaan taageer- Waxoo dhan waa lacag la’aan.
Waa maxay nooca taageerida uu qof ku heli karo fariin qoraal ahaan?
Dhallinyarada da’da yar (da'doodu tahay 13 illaa 17) ee u dira fariin qoraal ee ah “Start” lambarka 36072 waxaa lala xiriirin doonaa barnaamijka Noloshayda, Iska Joojinteyda (My Life, My Quit), ee 100% qarsoodi ah oo lacag la’aan ah oo si gaar ah loogu sameeyay dhalinyarada da’da yar. Marka ay dhalinyarada qaangaarka ah (da'da 18 illaa 24) ay u diraan fariin qoraal ah Quit Partner, waxay sidoo kale heli doonaan taageerid lacag la’aan, oo markaa ah.
Haddii uu qof xiiseynayo mid ka mid ah barnaamijyadeena Quit Partners ee takhasuslaha ah, oo ay ka mid yihiin American Indian Quitline, Quit Partner Pregnancy iyo Barnaamijka Post-Partum (ilmo dhallida kadib) ama Barnaamijka Caafimaadka Hab-dhaqmeedka, waxay u diri karaan fariin qoraal ee ah “Start” lambarka 36072 si ay jawaabo ugu helaan su'aalaha qaarkood. Halkaas kadib, tababare ayaa kala xiriirin doona Quit Partner wicitaan taleefanka ah si ay wax badan u bartaan/ogaadaan.
Qof kasta oo siiya talo, la talin ama daaweeya shakhsiyaadka si fudud ayuu ugu soo gudbin karaa barnaamijkeena . Kuwaasi waxaa ka mid ah xirfadlayaal sida bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka, kalkaaliyayaasha dugsiga, la-taliyayaasha iyo hoggaamiyeyaasha diinta. Waa wax fudud in lagu soo gudbiyo webka ama fakiska, oo marka aad qof soo gudbiso, Quit Partner ayaa la soo xiriiri doona 24 saacadood gudahood.
Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinaynaa inaad ku wadaagto macluumaadka ku saabsan Quit Partner websaydkaaga, warbaahintaada bulshada, joornaaladaada, waraaqo-bixintaada iyo kanaaladaada kale. Booqo bogga internetka ee Agabyada La Soo Dejisan Karo oo ka hel Xaanshiyo/Flyer-o, kaararka boostada, boostar iyo habab badan oo lagu wadaago macluumaadka ku saabsan Quit Partner.
Waxaad marwalba ka wici kartaa Quit Partner lambarka 1-800-QUIT-NOW (784-8669) oo la xiriir barnaamijka saxda ah. Haddii aad leedahay caymis caafimaad, guud ahaan waxaad heli kartaa caawimaad dhakhso leh adigoo toos ka waca caymiskaaga lambarka ku yaala gadaasha kaarkaaga caymiska caafimaadka. Waa kuwan lambarrada taleefoonnada adeegyada iska joojinta ee qaar ka mid ah caymiska caafimaad ee si badan looga yaqaano Minnesota:
Blue Cross and Blue Shield of Minnesota: 1-888-662-BLUE (2583)
Quit Partner wuxuu halkan u jooga inuu ku caawiyo. Dhammaan taageerideeda waa lacag la’aan, oo ay ku jiraan dadka aan haysan caymiska caafimaadka.
Wixii macluumaad oo aad bixiso waxaa loo isticmaalayaa keliya barnaamijka. Barnaamijka wuxuu u yahay lacag la’aan iyo qarsoodi dadka doortay inay isku qoraan. Hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan siyaasadeena asturnaanta . (Isagoo ah Barnaamij ka socda Waaxda Caafimaadka Minnesota, Quit Partner wuxuu raacaa siyaasada asturnaanta ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.)
Baro Sida Loo Helo Sharootooyin, Xanjo ama Nacnaca Lozenges-yada Lacag La’aanta ah